လှိုင်းမထတဲ့ ရေအိုင်ထင်လို့ နေခဲ့တာ။
သောက်ကြည့်တော့မှ ဆေးသကြားတွေတောင် ပါလိုက်သေးတယ်။
ဆူးမရှိတဲ့ ခင်မင်မှုလို့ ထင်ခဲ့တာ
ကျွန်မအတွက်အကိုပေးတဲ့ လက်ဆောင်လေးပါ.. :)
Posted by kiim at 19:54 8 comments
လက်ထပ်ပြီးစ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ထီပေါက်သည်။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ၄င်းကံကောင်းကြောင်း ချီးကျူးသည်။ ထို့နောက် သူငယ်ချင်းက မေးသည်။"ဒါနဲ့ ထီပေါက်တာသိတော့ မင်းမိန်းမ ဘာပြောသေးလဲ"ထီပေါက်သူက ဖြေသည်။"ဟင့်အင်း … ၀မ်းသာလွန်းလို့ ဆွံ့သွားလိုက်တာ ခုထိ စကားမပြောနိုင်သေးဘူး"သူငယ်ချင်းက ပြောသည်။"ကြည့်စမ်း၊ ကြည့်စမ်း … ကံကောင်းတဲ့သူတွေများ ဆက်တိုက်ကို ကံကောင်းကြတာပါလား"
လင်မယားနှစ်ယောက် စကားများ ရန်ဖြစ်ပြီးကာစတွင် အိမ်ရှေ့မှလူခေါ်ခေါင်းလောင်းသံ မြည်လာသည်။ ယောက်ျားလုပ်သူက တံခါးသွားဖွင့်ပေးသည်။အပြင်တွင် ဓားမြှောင်ကိုင်ထားသော မျက်နှာဖုံးစွပ် လူတစ်ဦး ရပ်နေသည်။ပြီးတော့ အသံအက်အက်ကြီးဖြင့် ယောက်ျားလုပ်သူအား ပြောသည်။"ကျုပ်က လူသတ်သမားပဲ။ မိန်းမတွေကို လည်လှီးပြီး သတ်ပစ်ချင်တယ်"ယောက်ျားဖြစ်သူက ထိုလူအား ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲ အိမ်ထဲသို့ လှမ်းအော်သည်။"မိန်းမရေ၊ ဟောဒီမှာ မင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့။ ဧည့်သည် လာတယ်ဟေ့။"
Posted by kiim at 17:296comments
Posted by kiim at 15:016comments
တစ်နေ့ နေ့ မှာတော့
Posted by kiim at 17:044comments
Posted by kiim at 22:105comments
နင်ထွက်သွားတဲ့ နေ့ 
Posted by kiim at 15:307comments
Posted by kiim at 21:034comments
ငါချစ်ခဲ့ တဲ့ အလိမ်အညာတွေက
နာစရာတွေနဲ့ သာဖြေသိမ့်နေမှာမို့ .
Posted by kiim at 14:12 8 comments
ဒီနေ့ ဟာသောကြာနေ့ ဖြစ်တာကြောင့်သဇင်နဲ့ ဝါ၀ါတို့ နှစ်ယောက်Practical လုပ်ရတာကြောင့်မေ တယောက်
ထဲဖြစ်နေခဲ့သည်။သဇင်နဲ့ ဝါ၀ါတို့ ကလက်တွေ့ ကတဖွဲ့ တည်းကျလို့ အတူတူလုပ်ရပြီးမေကတော့သီးသန့် ဖြစ်
ထိုင်ရင်းသယ်ရင်းနှစ်ယောက်အာကိုစောင့်နေမိသည်။ထိုင်နေရင်းနဲ့ ဟိုနေ့ ကတွေ့ ခဲ့ သည့်မျက်လုံးလှပိုင်ရှင်
လေးဆီအတွေးကရောက်သွားခဲ့ သည်။လှလိုက်တဲ့ မျက်လုံးလေး
တွေးရင်းနဲ့ မေရင်တွေခုန်လာသည်။အို..ငါသူ့ ကိုချစ်နေမိပြီလား...မသိဘူးကွာ..သူ့ ဟာသူပြောရင်းရှက်စိတ်
လိုက်သည်။ရင်တွေပိုခုန်လာခဲ့သည်။မေ့ ဆီအရောက်သွေးကသူ့ ဂျာကင်အိတ်ထဲကလက်ကိုင်ပုဝါလေး
မေ့ဆီကမ်းပေးလျှက် ဒါပျိုပျိုမေ့လက်ကိုင်ပုဝါလေးမဟုတ်လား....လို့ မေးလိုက်တော့မှရဲရင့်သွေးနဲ့ စတွေ့တဲ့ 
ဟိုနေ့ ကပျိုပျိုမေနဲ့ တွေ့ တုန်းကလမ်းမှာကျကျန်ခဲ့တာ..ကျနော်ချက်ချင်းလာပေးမလို့ ပဲ..မအားတာနဲ့ ..အဲဒါ..
အော်...ဟုတ်..ရပါတယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.ဒါနဲ့ သူ့ နာမည်က
ဟုတ်..မေလဲဝမ်းသာပါတယ်..မေ့ ကိုမေလို့ ပဲခေါ်ပါ /ရပါတယ်..
အဲဒီအချိန်မှာပဲ.သဇင်နဲ့ ဝါ၀ါတို့ မေ့အနားရောက်လာပြီး ဟိတ်..မေ နင်ဘယ်သူနဲ့ စကားပြောနေလဲဆိုတာ
ငါတို့ တွေ့ လိုက်တယ်နော်..နင်မှန်မှန်ပြောစမ်း..သွေးကိုချစ်နေပြီမဟုတ်လား..
အဲဒီနောက်ပိုင်းသွေးနဲ့ မေတို့ ရင်းနှီးသွားကြသည်။အတူသွားအတူစားအတူလာနဲ့ သွေးဟာမေ့ရဲ့ အရိပ်လေးပ
မာမေသွားရာနောက်အမြဲလိုက်ပေးတတ်သည်။ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေကြာလာပြီး.တစ်နေ့ သွေးနဲ့ မေတို့ နှစ်ယောက်
မေ ကျနော့ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ နော်..
ကျနော်မပြောဘူးလို့ ကို့ ယ်ကိုယ်ကိုထိန်းထားပါသေးတယ်.ဒါပေမယ့်မရဘူးဗျာ..ကျနော်မေ့ ကိုချစ်တယ်..
မေ ရက်ရှည်လများစောင့်စားလာခဲ့တဲ့ စကားလေးတခွန်း သွေး ပြောနေပြီလေ..မေခေါင်းလေးကိုအသာငုံ့ 
အခုလိုပြောလိုက်လို့ မေစိတ်မဆိုးပါနဲ့ နော်..မေ့ ကိုတကယ်ချစ်တာပါ.ကျနော့ကိုအဖြေမပေးပါနဲ့ ဦး..
အိမ်ပြန်ရောက်တော့မေအပျော်လွန်ပြီးစိတ်ကူးတွေယဉ်လျှက်ပြုံးစိစိဖြစ်နေတာကို ကိုကို မြင်တော့
ဟိတ်..မေ..တယောက်ထဲဘာတွေပြုံးနေတာလဲ..ရွာသာကြီးသွားချင်လို့ လား..နဲ့ လိုက်နောက်နေတော့သည်။
မေမေရေ..ဒီမှာဗျို့ ..မေ့ ကိုလိုက်စနေတယ်..ကိုကိုစုတ်ပေါ့...
ဟယ်..ကို့ ညီမကိုအဲလိုပြောရလား..ဒီကောင်လေးနော်..လို့ ပြောရင်းကိုကို့ ဗိုက်ခေါက်ကိုလိမ်ဆွဲလိုက်သည်။
ညနေပိုင်းထမင်းစားအပြီးဟည့်ခန်းတွင်မိသားစုဝိုင်းဖွဲ့ ပြီးစကားပြောဖြစ်ရာ..ကိုကိုကမေ့ အကြောင်းကိုသိလို့ ပဲလားမသိ....မေမေ....မေမေ့သမီးနေ့ လည်ကတယောက်ထဲပြုံးနေတာရီးစားများရနေပြီလားမသိဘူးနော်..
ဟာ..မဟုတ်တာမေမေရာ...မေ ကအပျိုကြီးလုပ်ပြီးမေမေတို့ နဲ့ တသက်လုံးနေမှာ
မယုံနဲ့ မေမေ..ဒါလားယောင်္ကျားမယူမဲ့ ရုပ်..ဟားဟား..
မောင်နှမနှစ်ယောက်စ နောက် နေ တာကိုဖေဖေနဲ့ မေမေကသဘောကျနေကြသည်။
ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်တာမို့ သွေးနဲ့ မေတို့ မုန့် စားထွက်ကြရင်းအပြန်ကန်တော်ကြီးကိုသွားပြီးနေရိပ်တဲ့ နေရာ
မေရှက်စိတ်ကြောင့်ခေါင်းလေးငုံ့ ထားမိသည်။
ဟုတ်တယ်သွေးရယ်...မေ သွေးကိုစတွေ့ တည်းကချစ်ခဲ့တာပါ..ယောင်္ကျားတွေကိုအထင်မကြီးတတ်တဲ့ 
မေ..သွေးကိုတော့အထင်ကြီးနေမိပြီ..မာနကြီးလွန်းတဲ့ မေ..သွေးနဲ့ ကျမှမာနတွေခ၀ါချခဲ့ရပြီ..
ရေးရမှာပျင်းလို့ ..ဟီးဟီး..မကောင်းပေမယ့်လာဖတ်ပေးတဲ့ သယ်ရင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.. :)
Posted by kiim at 13:273comments
Vegetable Art တဲ့ 
Posted by kiim at 15:433comments
Posted by kiim at 20:226comments
ရှိသည့်အနက်မေဟာအငယ်ဆုံးလေးမို့ ဖေဖေမေမေနဲ့ ကိုကိုတို့ ရဲ့ အချစ်ကိုခံရတဲ ခပ်ဆိုးဆို့းကောင်မလေး၊
လူကုန်ထံအသိုင်းအ၀ိုင်းကဆင်းသက်လာသူမို့ လိုလေသေးမရှိအောင်ပိုက်ဆံကိုသုံးဖြုံးနိုင်တဲ့ လိုတရမင်းသမီးလေးတပါးဖြစ်နေပြန်ရော။
မသိသူမရှိလောက်အောင်ယောင်္ကျားလေးများရဲ့ အချစ်ကိုခံရတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်နေပြန်ပါရော။
ဒါပေမယ့်မေကတော့ဘယ်ယောင်္ကျားလေးကိုမှအထင်မကြီင်္းတဲ့ အပြင်မေ့ ကိုပိုးပန်းလာတဲ့ ယောက်င်္ျားလေး
လောကမှာမေအထင်ကြီးတဲ့ ယောင်္ကျားတယောက်မှမရှိဘူးလို့ တောင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြေညာခဲ့ဖူးသည်။ယောင်္ကျားတွေ
ရဲ့ အချစ်ကိုလဲမယုံခဲ့ပေ..ဒါကြောင့်ပဲမေဟာသူ့ ကိုချစ်တယ်လို့ ပြောလာတဲ့ ယောင်္ကျားတွေကိုဟားတိုက်နေခဲ့
မိသေးသည်။"ငါတော်တော်ဗရုတ်ကျခဲ့တာပဲ..အို..ငါ့အမှားမှီမဟုတ်တာ..သူတို့ ကဘာလို့ ချစ်တယ်လို့ လာပြော
လဲနော"..လို့ တောင်ကို့ ယ်ကိုယ်ကိုပြန်ဖြေသိမ့်လိုက်သေးသည်။
"ငါချက်ခြင်းလာတာပဲ..နင်တို့ သာစိတ်စောနေလို့ ကြာတယ်လို့ ထင်နေတာပါ"
လို့ ပြောရင်းလျှာလေးထုတ်ပြုံးပြလိုက်သည်။ကိုကို့ ရှေ့ မှာမို့ ဟုတ်လို့ သာပြောလိုက်ရတာပါ..မေကတော့ကိုကို
"ဟဲ့မေ..ဒီနေ့ ဖိဆစ်ကင်းကိုသွားကြည့်ရအောင်..ချောချောလေးတဲ့သိလား.."
"အံမယ် မေကဘာလို့် ကြည့်ရမှာလဲ..သူကသာလာကြည့်ရမှာလေ.."
ပြောသာပြောလိုက်ရတာပါ..မေကိုယ်တိုင်တောင်တချက်တော့တွေသွားရသည်။မေမြင်ဖူးတဲ့ ယောင်္ကျားလေးများနဲ့ 
ရရင်အရမ်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ယောက်င်္ျားတယောက်ပေါ့။ အဲ..အားလုံးထဲမှာသူ့ မျက်လုံးလေးကလက်နေသည်။
"မေ..နင့်ကိုကြည့်သွားတယ် တွေ့ လား."
"တွေ့ သားပဲ..မေ ပဲလေ..သိတယ်မဟုတ်လား..ဟဲဟဲ.."
"အို့ အို့ အို့ ..ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်..တောက်တောက်တောက်.. "လက်ဖျောက်လေးတီးပြီးခွေးကိုခေါ်သလိုလုပ်ပြ
ဒါကိုမေတို့ ကြည့်ပြီးတဟားဟားနဲ့ ကျန်ခဲ့သည်။
မှတ်ထား..မေ့ ကိုအဲလိုလာစမ်းလို့ မရဘူး..ဟားဟား....
မေ့ ကိုလိုက်တဲ့ သူတွေကိုအဲလိုလုပ်လွန်းလို့ မေ့ကိုချစ်ကြပေမယ့်တော်ရုံယောက်ျားလေးတွေမလိုက်ရဲကြပေ။
Posted by kiim at 12:075comments
GoOd bYe(၃ ပတ်စာ :P )
ကြနဲ့ နော်..စာမေးပွဲနီးနေလို့ ရှင့်..ဟီး...
တိဝူး..တိဝူ..သွား...ဒူ့ ကိုမှတိဝူး...(ဘယ်သူမှလဲမမိတ်ဆက်ဖဲနဲ့ နော့..ဟီး :P)
ချင်းမလေးဆိုတာခေါင်းအရမ်းမာတဲ့ ကောင်မလေး....လုပ်ချင်တာကိုလာမတားနဲ့ ..
လုပ်ချင်တာလုပ်ရဖို့ ဆိုရင်ဘယ်သူ့ ကိုမှဂရုမစိုက်ဘူး..ကြောက်လဲကြောက်ဘူး..
သူ့ ကိုချောက်ချင်ရင်စာမေးပွဲနဲ့ ချောက်လိုက်...တုန်နေအောင်ကြောက်တာ.. :P
ဂယ်ပြောတာ..ချောလွန်းလို့ ကိုင်လို့ တောင်မရဘူး..(င်္ဆီသုတ်ထားတာ :P)
Posted by kiim at 17:306comments
အချစ်ကို မဖွင့်ဟမိအောင် မျိုသိပ့်ရတာလည်း
တင်ဖြစ်အောင်တင်ပေးပါဆိုလို့ (မမျိုသိပ်နိုင်တော့ဘူး တဲ့ :P :P)
Posted by kiim at 16:272comments
Posted by kiim at 18:395comments
Posted by kiim at 17:015comments
"အဖြေရတာနဲ့ ကိုတို့ လက်ထပ်ကြတော့မှာ"..
ကို့ ကို့ ဆီကသူမကြားနေကျစကားက"ကလေးကိုကိုကိုသိပ်ချစ်တယ်..အရမ်းလွမ်းနေပြီကလေးလေး
ကိုကိုဟာစာရေးဆရာပီပီချစ်တဲ့ စကားလေးတွေကိုတနေ့ တမျိုးမရိုး၇အောင်သူမကိုပြောနေကျပါ.
ကိုကို့ ရဲ့ အပြောကောင်းမှု၊ကဗျာဆန်မှုလေးတွေကြောင့်ပဲသူမကိုကို့ ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာမဟုတ်လား.
သူမဆိုတာငယ်ငယ်လေးတည်းကအချစ်သတ်လာသူပီပီသူမကိုပထမဆု့းချစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ကိုကို့ ကို
သူမနဲ့ မင်းသူတို့ ဟာအပြင်မှာမတွေ့ ဖူးကြပေမယ့်အွန်လိုင်းကနေသိခဲ့ကြပြီးရီးစားတွေလိုပြောဆိုဆက်ဆံ
ကြသူတွေပါ....မင်းသူဟာကဗျာဆန်ပြီးအရမ်းစိတ်ကူးယဉ်တတ်တဲ့ သူတယောက်ပေါ့....မင်းသူနဲ့ သူမတို့ 
စကားပြောဖြစ်တိုင်းသူမဆီကိုလာခဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊သူမနဲ့ သွားမည့် နေရာလေးတွေပြောမည့်စကားလေးတွေ
"ပြီးရင်အဲဒီကအပြန်ကိုကို့ အိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်..ကို့ မေမေနဲ့ ပေးတွေ့ မယ်လေ..ကလေးကို."
မင်းသူ့ စကားကိုသူမမလွန်ဆန်ဝံ့ပေ။သူမဘ၀ဟာသုညသက်သက်သာဖြစ်ပြီးသူမဘ၀ထဲကိုမင်းသူဆိုတဲ့ ယောက်ျား
ဒီလိုနဲ့ မင်းသူနဲ့ သူမတို့ ဆုံဖြစ်ပေမယ့်စကားသိပ်မပြောဖြစ်တော့ပေ၊သူမလဲမေ့ပျောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာ
"ကလေး၊ကိုရန်ကုန်ကိုလာခဲ့မယ်၊ကလေးနဲ့ လာတွေ့ မယ်၊ကို့ ကိုကလေးထွက်တွေ့ ရမယ်နော်"
သူမအရမ်းအံ့သြခဲ့ရသည်။သူမမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေသောကိုကိုကသူမကိုတွေ့ ချင်သည်တဲ့ လေ....
"သူမကိုဘာကိတ်စနဲ့ လာတွေ့ မှာလဲ"
"ကိုကလေးကိုပြောစရာတွေရှိတယ်၊ကို ယ့်မှာအရှုံးတွေကြီးပါကလေးရယ်....ကို့ ကodoိုနားလည်ပေးပါ."
"ကိုသူ့ ကိုသူမဘာတွေနားလည်ပေးရဦးမှာလဲ..သူမလာမတွေ့ ချင်ဘူး..ဘယ်သူနဲ့ မှမတွေ့ တော့ဘူးလို့ 
"ကိုနားလည်ပါတယ်ကလေးရယ်၊ဒါပေမယ့်ကို့ ကိုလာတွေ့ ရမယ်နော်..တွေ့ ကိုတွေ့ ရမယ်.."
"ကိုသူ၊သူမကိုအဲလိုအနိုင်မကျင့်ပါနဲ့ ..သူမမတွေ့ ချင်ဘူး.."
ပြီးတော့သူမနားမလည်တာကဘာလို့ သူမကိုတွေ့ ချင်နေရသလဲ၊ပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာဘာပြောမလို့ လဲ
သူမသွားတွေ့ သင့်သလာူး၊မတွေ့ ပဲနေရင်ကောင်းမလား..သူမရင်ထဲမေးခွန်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေသည်။
ထွက်သွားခဲ့သည်၊အခုလဲသူ့ သဘောတိုင်းပဲသူမကိုလာတွေ့ ဦးမည်၊
သူမမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ နှလုံးသား၊နာကျင်မှုတွေကိုဘာကြောင့်များတူးဆွချင်နေရသလဲ၊သူ့ အလိုအတိုင်းလုပ်လို့ ရ
ကိုကိုမသိလိုက်တာကတော့သူမဟာမင်းသူနဲ့ ချစ်နေတုန်းကလိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ သည့် ကောင်မလေးတယောက်
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး..မရေးဖူးလို့ ရေးကြည့်တာ..ဟီးဟီး..ပထမဆုံးရေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးပေါ့..
ဆုံးအောင်ဖတ်ပေးကြပါနော်..နော်.. :P :P
Posted by kiim at 17:427comments
အခုတလောတောင်ပေါ်သားပြောသလိုပါပဲ..တက်တဲ့ ရာသီလို့ တောင်ပြောလို့ 
အခုတော့အရင်ကလိုမဟုတ်ဘူး..သူတို့ တက်ဂ်ကြတာက"အချစ်ဆိုသည်မှာ"တဲ့ လေ...
အချစ်ဆိုတာ.......အင်း...အချစ်ဆိုတာဆိုတာထက်ကျမတွေ့ ဖူးတဲ့ အချစ်ဆိုတာ
သူ့ ကိုကျမအရမ်းချစ်ခဲ့တယ်...သူဘာလုပ်လုပ်သူ့ ကိုအဆိုးမမြင်တော့ဘူး..
အဲဒီတော့အချစ်ဆိုတာ" Love is blind" ပေါ့လေ....
အနေနီးခြင်းဝေးခြင်းနဲ့ လဲဆိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်..ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်
အချစ်ရဲ့ အဓိပါယ်မှန်ကိုမသိသေးပါဘူး...ဒါပေမယ့်ကျမသူ့ အပေါ်ထားတဲ့ အချစ်ဟာ
နောက်ပိုင်းကျတော့လဲသူ့ ဆီကဘာမှမရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး...သူ့ ကိုချစ်နေရရင်ကျေနပ်
ပြီဆိုတဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ ပဲချစ်ခဲ့မိပါတော့တယ်.....
ဒါနဲ့စကားမစပ်..မေတ္တာဆိုတာရောင်ပြန်ရှိတယ်..အသွားနဲ့ အပြန်ရှိတယ်လို့ ပြောကြပေမယ့်
ဘာလို့ များအချစ်ဆိုတဲ့ ၁၅၀၀ကတော့အသွားနဲ့ အပြန်မရှိရတာလဲနော်..အဲဒါလေး
အဟင့်အဟင့်.... :P နောက်တာပါ..ဟီးဟီး..
သူတို့ ပြောတဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာနဲ့ ကျမရေးလိုက်တဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာကတူမတူုတော့
ကဲ....ကြယ်ဇင်သွေးနဲ့ တောင်ပေါ်သားနှင့်မက်မက်ကလေးတို့ ရေ..ကျေနပ်တော့နော်....
ဒီလောက်ပဲရေးတတ်တယ်...ရေးခိုင်းတာနဲ့ တို့ ရေးလိုက်တာနဲ့ မတိုက်ဆိုင်ရင်တော့
မရရအောင်တိုက်ဆိုင်အောင်ပြင်ဖတ်လိုက်ကြနော်....ဟီး.. :P :P
အချစ်ကိုလက်တွေ့ အသုံးချနေပြီဖြစ်တဲ့ မအိ( ဟီးဟီး :P)
အမုန်းကိုအရမ်းကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုလင်းလက်( :P :P )
ရေးပေးကြပါနော်...မရေးပေးရင်ကို့ ကို ကိုသတ်သေလိုက်မှာနော်..ဟီး.. :P :P
Posted by kiim at 15:12 11 comments
ဟိုနေ့ ကအိမ်ကတက်ဂ်ထားတာမအားတာနဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ မှရေးပေးမယ်ဆိုပြီး
လို့ လာပြောသွားတာနဲ့ ..အင်းလေ..မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီးရေးပေးလိုက်ပါတယ်..
ဘာတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကဖြစ်သလိုစားခြင်းတဲ့ ..
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ကျမကအမြဲဖြစ်သလိုစားတတ်လို့ ပဲလေ..
အသားဟင်းထက်လက်ဖက်သုတ်လေးနဲ့ ..စားလိုက်ရရင်ဗိုက်ပိုဝတတ်တဲ့ ကောင်မလေး...
လက်ဖက်သုတ်ကြိုက်တတ်လွန်းတဲ့ ကျမကိုအဖွားကနာမည်ပေးထားတာ cing zam သုတ်တဲ့ လေ..
ဟီးဟီး.. :P :P
မစားဖြစ်တာ...လက်ဖက်ရည်တောင်ကို့ ဟာကိုဆိုမဖျော်တော့ဘူး..မုန့် ရှိရင်မုန့် ပဲစားသွားတာ...
မှပေါ်လာတဲ့ အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲထုပ်ကအရမ်းကောင်းတာ..မယုံရင်စားကြည့်... :P
ဒါကကျောင်းတက်တဲ့ နေ့ တွေပါ..ပိတ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုရင်တော့မနက်ကလက်ဖက်ရည်နဲ့ 
အိမ်ပြန်ရင်အပြင်ပြန်ထွက်လို့ မရတော့လို့ ..ဟီး..ပြောရင်းနဲ့ ကို့ မကောင်းကြောင်းတွေပေါ်လာပြီ..
ဗိုက်ကိုတင်းရောပဲ... :P :P
ကဲေ၇းလို ပြီးပါပြီ...မအိနဲ့ အိမ်တို့ ရေ..
ကဲပါ..တို့ လဲတက်ဂ်ချင်တယ်..တက်ဂ်လိုက်ဦးမယ်...ဒူ့ ကိုတက်ဂ်ရင်ကောင်းမလဲ...
Posted by kiim at 16:154comments
Posted by kiim at 19:093comments
ဆန္ဒအစုံရဲ့ အရှိန်အဟုန် ပြင်းတန်မှုကြောင့်လား...
Posted by kiim at 17:490comments
အခုတခါလဲသယ်ရင်းပို့ လိုက်တဲ့ fwd mail ပါပဲ.. အားလုံးအတွက်..အထူသဖြင့်ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက် ပေါ့..ပိုးပန်းရင်ဘယ်နှစ်ပွင့်ပေးရမယ်စသဖြင့်ပေါ့... ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေအတွက်လဲပါတာပေါ့လေ သိထားဖို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်...
နှင်းဆီ ၁ပွင့်..... ရင်ထဲမှာ မင်းပဲရှိတယ်
နှင်းဆီ ၂ပွင့်..... ဒီကမ္ဘာမှာ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်တည်း
နှင်းဆီ ၃ပွင့်..... မင်းကိုငါချစ်တယ်
နှင်းဆီ ၄ပွင့်..... သေတောင် မခွဲဘူး
နှင်းဆီ ၅ပွင့်..... တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးတယ်
နှင်းဆီ ၆ပွင့်..... တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးစား၊ ချစ်ခင်၊ ခွင့်လွတ်တယ်
နှင်းဆီ ၇ပွင့်..... မင်းကို တိတ်တခိုးလေး ချစ်နေတယ်
နှင်းဆီ ၈ပွင့်..... မင်းရဲ့ ကြင်နာယုယမှုနဲ့ အားပေးမှုကို ကျေးဇူးတင်တယ်
နှင်းဆီ ၉ပွင့်..... အမြဲတမ်း
နှင်းဆီ ၁၀ပွင့်...... အပြစ်ကင်းစင်သော ချစ်သူ
နှင်းဆီ ၁၁ပွင့်...... မင်းတစ်ယောက်ကိုပဲ ဂရုစိုက်တယ်။
နှင်းဆီ ၁၂ပွင့်...... တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးလို့ချစ်တယ်။
နှင်းဆီ ၁၃ပွင့်...... သူငယ်ချင်းအချစ်
နှင်းဆီ ၁၄ပွင့်...... ဂုဏ်ယူပါတယ်
နှင်းဆီ ၁၅ပွင့်...... I'M SORRY！
နှင်းဆီ ၁၆ပွင့်...... မတည်ငြိမ်သော အချစ်
နှင်းဆီ ၁၇ပွင့်...... ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အချစ်
နှင်းဆီ ၁၈ပွင့်...... ရိုးသားပွင့်လင်းခြင်း
နှင်းဆီ ၁၉ပွင့်...... မျှော်လင့်စောင့်စားခြင်း
နှင်းဆီ ၂၀ပွင့်..... ငါ့မှာ ရိုးသားတဲ့အချစ် တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။
နှင်းဆီ ၂၁ပွင့်..... ရိုးသားတဲ့အချစ်
နှင်းဆီ ၂၂ပွင့်..... မင်းကံကောင်းပါစေ
နှင်းဆီ ၂၅ပွင့်..... မင်းပျော်ရွှင်ပါစေ
နှင်းဆီ ၃၀ပွင့်..... ဖူးစာကိုယုံတယ်
နှင်းဆီ ၃၆ပွင့်..... ရိုမန်တစ်
နှင်းဆီအပွင့် ၅၀..... မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ကြတယ်
နှင်းဆီအပွင့် ၉၉..... FOREVER！
နှင်းဆီအပွင့် ၁၀၀..... ၁၀၀% အချစ်
နှင်းဆီအပွင့် ၁၀၁..... အရမ်း.. အရမ်း..ချစ်
နှင်းဆီအပွင့် ၁၀၈..... လက်ထပ်ခွင့် ပေးပါ
နှင်းဆီအပွင့် ၁၁၁..... အဆုံးမဲ့အချစ်
နှင်းဆီအပွင့် ၁၄၄..... နေ့တိုင်း၊ လတိုင်း၊ အသက်ရှင်နေသရွေ့ မင်းကိုချစ်တယ်
နှင်းဆီအပွင့် ၃၆၅..... နေ့တိုင်းလွမ်းတယ် နှင်းဆီအပွင့် ၉၉၉..... မချုပ်ငြိမ်းတဲ့အချစ်၊ အမြဲတမ်းထာဝရ
Posted by kiim at 17:192comments
ဒီကဗျာလေးကကျမကိုကလေးလေးလို့ ခေါ်ခေါ်နေတဲ့ သူအတွက်ရေးပေးထားတာပါ သူ့ူ့့နေရာမှာဝင်နေပြီးရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်.... ကျမကတော့သူ့ကိုမီးမီးလို့ ပြန်ခေါ်ပါတယ်... မီးမီးရေ..ကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့ကွယ်.. တို့ လဲတတ်သလောက်နဲ့ ရေးပေးထားတာ...ဟိဟိ မီးမီးကိုသိချင်ရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ....မီးမီးပျော်ရွှင်ပါစေနော်.....
Posted by kiim at 16:242comments
ဟိုနေ့ ကညမီးအိမ်နဲ့ တောင်ပေါ်သားက"ပထမ"ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်
နဲ့ tag လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ကျမတော်တော်အကျပ်ရိုက်သွားတယ်
ဘာလို့ လဲဆိုတော့မေ့နေခဲ့ တာကြာပြီလေ..ပထမတွေကို....
မရေးရင်စိတ်ကောက်ကြမယ့်ရုပ်လေးတွေမို့ .... :P:P:P
သူ့ နာမည်ကnlmတဲ့ 
H ထင်တာပဲ..မေ့သွားပြီ.. :D
ဘုရားကျောင်းမှာသယ်ရင်းတွေနဲ့ အတူခရစ်စမတ်မတိုင်မီ၂၄ရက်နေ့ ည
မိုးလင်းထိဆော့ခဲ့ ဖူးတယ်...နောက်နေ့ ၂၅ရက်နေ့ ဘုရားကျောင်းမှာ
ပထမဆုံးချစ်သူဆိုလို့ နောက်ဆက်တွဲတွေရှိသေးတယ်မထင်နဲ့ နော်
ကျမရဲ့ ချင်းမလေးဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးဖြစ်မလာခင်အရင်ကဘလော့ဂ်တစ်ခု
ရေးခဲ့ ဖူးတယ်..my private world တဲ့ ..အဲဒါသူများရဲ့ deleteလုပ်ခြင်းခံလိုက်
ရတယ်လေ..စရေးခဲ့ တဲ့ နေ့ ကိုတော့မေ့သွားပြီ..၂၀၀၆ဒီဇင်ဘာလို့ တော့ထင်
ကျမရဲ့ သယ်ရင်းကျော်လင်းထွန်း၇ဲ့ ဘလော့ဂ်ပါ..သူ့ ကြောင့်ဘလော့ဂ်ဆိုတာ
ကိုသိသွားခဲ့ တာပေါ့..ဒီဘလော့ဂ်ဖြစ်မြောက်အောင်အစစအရာရာကူညီခဲ့ တာ
ကဲ..တက်ဂ်တာလဲရေးလို့ ပြီးပြီ..ညမီးအိမ်နဲ့ တောင်ပေါ်သားတော့
Posted by kiim at 11:542comments
အခုလဲသယ်ရင်းတယောက်ပို့ လိုက်တဲ့ fwd mail ကိုသဘောကျလို့ အားလုံး
ပုဒ်မ(၃ က)။ယောင်္ကျားတို့ ကိုဂရုမစိုက်သောအမျိုးသမီးများအား"ဒုတ်ခရောက်နေသူကို
ပုဒ်မ(၄ ဂ)။မိမိ၏ချစ်သူအားလက်ဖျားနှင့်ပင်မထိ၊shopping mall၊လှော်ကား၊ချောင်းသာ၊
စသောသမီးရီးစာတို့ ၏ဆောင်ရွက်ဖွယ်caseတို့ ကိုမပြုလုပ်ပါကအလုပ်တာဝန်လစ်ဟင်း
ပုဒ်မ(၅ က)။အိမ်ထောင်ရှိမိန်းမတို့ ကိုပိုးပန်းသူယောင်္ကျားများအား"တားမြစ်နယ်မြေတွင်
Posted by kiim at 12:020comments
တစ်နေ့မှာ လယ်သမားတစ်ဦးရဲ့ လယ်ထဲ ပန်းကန်ပြားပျံတစ်စီး ဆင်းသက်လာတယ်။ ပန်းကန်ပြားပျံထဲကနေ ဂြိုလ်သားတစ်ကောင် ထွက်လာပြီး လယ်သမားနဲ့ စကားပြောတယ်။ ဘာသာစကားချင်း မတူတော့ ခြေလက် အမူအရာတွေနဲ့ စကားပြောတော့တယ်။
ဂြိုလ်သားက လယ်သမားကို လက်ညှိုးထောင်ပြလိုက်တယ်။
လယ်သမားက ပြန်ပြီး လက်ညှိုးကို အောက်စိုက်ပြလိုက်တယ်။
ဂြိုလ်သားက ထပ်ပြီး လက်ညှိုးသုံးချောင်း ထောင်ပြလိုက်တယ်။
လယ်သမားက ငါးဆယ်ပုံသဏ္ဍာန် လုပ်ပြလိုက်ပြန်တယ်။
ဂြိုလ်သားက ထပ်ပြီး လက်မနဲ့လက်ညှိုးကို ထောင်ပြီး (7)ပုံ လုပ်ပြလိုက်တယ်။
လယ်သမားက လက်မ၊ လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို ပွတ်ပြလိုက်တော့ ဂြိုလ်သားက ပြေးပါလေရော..
လယ်သမားက အိမ်ရောက်တာနဲ့ သူ့မိန်းမကို "ရှင်မရေ.. ဒီနေ့လယ်ထဲမှာ လူထူးဆန်းတစ်ယောက် တွေ့ခဲ့တယ်ကွ၊ ငါတို့စိုက်ထားတဲ့ အပင်တွေ မိုးပေါ်က ကျလာတာလားလို့ မေးတော့ ငါက မဟုတ်ဘူး မြေကြီးကနေ ထွက်လာတာလို့ ပြောလိုက်တယ်။ သူက ၃ ပိဿာကို ဘယ်လောက်လဲ မေးတော့ ငါက ၅၀ လို့ပြောလိုက်တာ။ သူက ခုနှစ်ပိဿာ ဘယ်လောက်လဲ ထပ်မေးတော့ ငါက ပိုက်ဆံရေနေတဲ့ ပုံစုံနဲ့ ပိုက်ဆံ အရင်ယူလာခဲ့လို့ ပြောလိုက်တာ မ၀ယ်ဘဲ ထွက်ပြေးသွားတယ်"
ဂြိုလ်သားလည်း ဂြိုလ်ပေါ် ပြန်ရောက်ပြီး " ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကျုပ် ဒီနေ့တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျုပ်မိုးပေါ်က လာတယ်လို့ ပြောတော့ သူက မြေကြီးထဲက လာတာတဲ့။ ကျုပ် လူသုံးယောက် သတ်ဖူးတယ်ပြောတော့ သူက လူအယောက် ၅၀ သတ်ဖူးတယ်တဲ့။ ကျုပ်က သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လိုက်တာလို့ ပြောလိုက်တော့ သူက သူ့လက်နဲ့ ဖိသတ်လိုက်တာတဲ့။ ကျုပ်လည်းလန့်ပြီး လစ်တော့တာပဲ"။
“ ငါ့မိန်းမ စိတ်တိုပြီဆိုရင် ငါ့ကို
ငါတို့ ကလေးတွေ ငြိမ်သွားကုန်ရော။
အိုကွာ၊ အိမ်မှာရှိတဲ့ ခွေးတွေပါမကျန်
တစ်ယောက်မှ သူ့ကို ခံမပြောရဲကြဘူး ”
“ ငါစိတ်တိုပြီ ဆိုရင်လည်း အိမ်က
ပြတင်းပေါက်တွေ၊ တံခါးတွေကို ထ
ဟောက်ပစ်တာပဲ။ ဒီဟာတွေ အကုန်လုံး
တုတ်တုတ်တောင် မလှုပ်ဝံကြဘူးကွ ”
Posted by kiim at 17:460comments
ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ဆရာမတစ်ဦးကို တိတ်တခိုး နှစ်သက် စွဲလမ်း နေမိသည်။ တစ်နေ့တွင် အရဲစွန့်ပြီး ဆရာမကို ချစ်ကြိုက်ကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့သည်။ ဆရာမက ကျောင်းသားနှင့် ဆရာမမှာ မချစ်သင့်ကြောင်း၊ မယူသင့်ကြောင်း အမျိုးမျိုး ပြောဆိုဆုံးမခဲ့ သော်လည်း ကျောင်းသားက အချစ်တွင် အသက်အရွယ်၊ ရာထူးဂုဏ်သိက္ခာ မခွဲခြားကြောင်း ပြောပြီး တစ်ဇွတ်ထိုး ရှေ့တိုးခဲ့သည်။
ဆရာမက မတတ်သာသည့်အဆုံး မင်းလို ကလေးကို ငါမချစ်နိုင်ဘူး ဟူသည့် သဘောဖြင့် "ဆရာမ ကလေးမလိုချင်ဘူး" ဟု ပြောလိုက်ရာ ကျောင်းသား ပြန်ပြော လိုက်သည်မှာ "ကလေးမရအောင် ကျွန်တော်သတိထားပြီး လုပ်ပါ့မယ်" ဟူတည်း။
တစ်ခါက သဲကန္တာရမှာ ဆာလောင်ပြီး သေလုနီးနီး ဖြစ်နေတဲ့ လူမည်းတစ်ယောက်ဟာ နတ်မီးခွက် တစ်လုံး ကောက်တွေ့သတဲ့။ မီးခွက်ကို ပွတ်လိုက်တော့ မီးခွက် စောင့်နတ်က ထွက်လာပြီး လိုရာဆု သုံးဆုကို တောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ သူက ခဏလောက် စဉ်းစားပြီး ...
(၃) နေ့တိုင်း ကောင်မလေးတွေရဲ့ တင်ပါးကို မြင်ရပါစေ
လို့ ဆုတောင်းလိုက်တာနဲ့ ဘုန်းဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ အဲဒီလူမည်းဟာ......
အိမ်သာအိုး တစ်လုံး ဖြစ်သွားသတဲ့ ...။
Posted by kiim at 14:154comments
အိမ်လေးကိုလာလည်ကြတဲ့ သယ်ရင်းများ...အကို၊အမများ၊မောင်လေးညီမလေးများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..ခဏတော့လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး...ဒီတော့အိမ်ရှင်မရှိပေမယ့်ကဗျာလေးတွေ ကိုဖတ်သွားပေးကြပါ....ပြီးတော့ခင်းကျင်းထားတဲ့ မုန့် လေးတွေကိုလဲစားသွားကြပါနော်.... အားမနာကြပါနဲ့ ..ကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပြီးစားသွားကြပါလို့ .... မုန့် ကျွေးနေလို့ ဘာနေ့ လဲမသိဘူးဆိုပြီးတွေးနေကြမှာပဲ..ဘာနေ့ မှမဟုတ်ပါဘူး.. ကျွေးချင်လို့ ကိုကျွေးတာပါ...အပြင်မှာမကျွေးနိုင်လို့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ ဘလော့ဂ်လေးမှာကျွေးလိုက်တာ ပါ....ဟိဟိ..... စားသွားကြနော်...အားရပါးရ....:P
Posted by kiim at 15:560comments
Posted by kiim at 14:032comments
Posted by kiim at 20:232comments
အချစ်ကိုတွေ့ခဲ့ရပေမယ့် လက်လမ်းခွင့်မရလိုက်တဲ့ ဘ၀မှာ ရူးသွပ်စွာနဲ့ မင်းကိုချစ်ခဲ့တယ်...။
မင်းလိုချင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ မပြည့်စုံတဲ့အပြင် အားနည်းချက်တွေနဲ့ငါဟာ မင်းကို မမျှော်လင့်ရဲပေမယ့် မင်းကိုချစ်ခဲ့တယ်။
တို့အတူရှိခဲ့တုန်းက မျိုသိပ်ထားတဲ့ ငါ့စိတ်တွေလည်း
ခုမင်းကို သတိရတိုင်း နာကျင်ရပေမယ့်
မင်းမျက်နှာလေးကို မြင်ချင်တွေ့ချင်တယ် ရယ်သံလွင်လွင်နဲ့ မင်းစကားလေးတွေ ကြားချင်တယ် မင်းခွင့်မပြုတော့မှာ သိပေမယ့်လည်း မင်းကိုချစ်ခဲ့တယ်။
Posted by kiim at 19:280comments
ဒီအထဲမှာအချစ်ကံမကောင်းလို့ အချစ်ကိုစိတ်နာကြတဲ့ သူတွေလဲရှိကြပြန်ရော...
သူတို့ လေးတွေရဲ့ ခံစားချက်လို့ တင်စားလို့ ရတဲ့ ကဗျာတိုတိုလေးတွေကို
ကျမကိုယ်တိုင်ရေးထားတာမဟုတ်ပေမယ့်ဂျီတော့မှာတင်ထားတာတွေ့ လို့ အရမ်း
ခံစားချက်ချင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ သူတွေအကြိုက်တွေ့ မှာပါ........ဟိဟိ....
အချစ်ဦး (First Love)
ဓါးသွားပေါ်ကပျားရည်စက်တဲ့ . . .တောက်!
Posted by kiim at 16:292comments
Posted by kiim at 12:502comments
Posted by kiim at 17:48 1 comments
ဟင်းးးးး.....Dream က တော့ လုပ်ပြန် ပြီ..
ကျောင်းကမပြီးသေးဘူး...တို့ လို့ တန်းလန်းနဲ့ ဆိုတော့..အင်း..ကျောင်းကသယ်ရင်း
ချင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ အဘိုးနဲ့ ဦးကြီးတို့ မိသားစုကိုဖုန်းဆက်ပြီးသာကြောင်းမာကြောင်းမေးမယ်.
အဝေးရောက်နေတဲ့ ချစ်သူကိုလဲနှုတ်ဆက်စကားတွေ..ပြီးတော့အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ
Dream ရေ မီးမီးကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါနော်...မသေခင်ဆယ်ရက်တွေကို
နောက်မရေးခိုင်းပါနဲ့ တော့..တွေးရင်းနဲ့ တောင်ကြောက်လာလို့ ..ဟိဟိ
Posted by kiim at 17:092comments
Posted by kiim at 21:54 1 comments
Posted by kiim at 16:21 1 comments
Posted by kiim at 10:32 1 comments
ငါဟာမင်းရဲ့ အမိန့် တွေ
Posted by kiim at 17:252comments
မပြောဘဲနဲ့ အတွင်းထဲက စကားလုံးလေးတွေ
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက …............ကိုယ့်ကိုလိမ်တဲ့သူ
အကြောက်ဆုံးအချိန်….....ချစ်တဲ့ သူတွေကခွဲခွါသွားတဲ့ အချိန်
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းမဲ့ဆု….......ချစ်တဲ့သူနဲ့ ကွေကွင့်းခြင်းဒုတ်ခ. မချစ်သောသူနဲ့ တွေ့ 
ခြင်းဒုတ်ခတို့ မှကင်းဝေးပါလိုကြောင်း.(မိဖုရားဖွားစောကိုအားကျလို့ :P).
အလွမ်းဆိုတာ…...............ရင်ထဲမှာတနှုံ့ နှုံ့ နဲ့ .
သူငယ်ချင်းဆိုတာ…........ခရီးတစ်ကွေ့ မှာတွေ့ကြုံလာတဲ့ ဒရိုင်ဘာတွေ..
ဒါနဲ့ ပဲခဲတံကို ကောက်ကိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ.......အဲ....မှားလို့ .... keyboardကိုစထိလိုက်တာနဲ့ .
လက်ကတရစပ် ဘာတွေရေးနေမှန်းကို မသိဘူး...... စာတွေကတရဟောကိုထွက်လာတာ....
Posted by kiim at 16:002comments
လုပ်ငန်းခွင် စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖို့ အလုပ်စားပွဲပေါ် အပင်စိုက်ပါ